Ekwesịrị ịkwado nchekwa ọrụ
N'ụtụtụ nke October 9, ụlọ ọrụ ahụ nwere nzukọ na nchekwa ọrụ na usoro iji chịkọta nchekwa ọrụ na mgbochi ọrịa na njikwa na nkeji nke atọ, nyochaa ọnọdụ nchekwa ugbu a na nsogbu ndị dị ugbu a, na ịhazi isi ọrụ nke mgbochi nchebe na. nkeji nke anọ.Gene...
Usoro injinia nke nitrogen na akụrụngwa mmepụta oxygen na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Nitrogen igwe, dị ka ihe ikuku nkewa ngwá, nwere ike ikewapụ elu ịdị ọcha nitrogen gas si air.Because nitrogen bụ ihe inert gas, ọ na-ejikarị dị ka a na-echebe gas.Nitrogen nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie ọxịdashọn na elu ịdị ọcha nitrogen environment.The na-esonụ edemede nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ...
Na-achụso ejiji akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma nabata ndụ ndụ ndụ
Na August 15, Fuyang City nchekwa nchekwa gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ ogbako na-arụ ọrụ, nzukọ ahụ na 2021 mgbochi mmetọ ikuku na njikwa ọrụ na-ahazi ma na-ebuga ya, ma wepụta atụmatụ mgbochi mmetọ ikuku na njikwa njikwa. Dị ka atụmatụ ahụ si dị, obodo ahụ ga-ebu o. ...
Remote zipu acacia Chinese dream, puku kilomita ebe ezute
Ememme etiti mgbụsị akwụkwọ na-ada n'ụbọchị iri na ise nke ọnwa asatọ nke kalenda ọnwa.Akụkọ mgbe ochie na-ekwu na Hou Yi na Chang 'e biri ọnụ n'ụwa. Otu ụbọchị, Chang 'e nọ na-asa uwe n'akụkụ osimiri mgbe ọ hụrụ echiche ya na mmiri wee chọpụta na ọ bụ agadi. Ya mere, hou Yi gara...
Ijide nzukọ nchịkwa azụmahịa
N'October 5 solstice 7, "Ogbako nke abụọ nke ogbako ọrụ njikwa ụlọ ọrụ" na ụlọ ọrụ ahụ, nzukọ ahụ bụ iji mejuputa mmụọ ogbako ọrụ 2021 n'oge na nzukọ dị mkpa, na August 1 - ọrụ njikwa ụlọ ọrụ, na ndabere nke doo anya maka nkeji...